Rugby : nodimandry tampoka i Rafaly Be | NewsMada
Rugby : nodimandry tampoka i Rafaly Be
Misaona ny tontolon’ny fanatanjahantena, indrindra ny taranja rugby. Nindaosin’ny fahafatesana, omaly talata tamin’ny 3 ora maraina, teo amin’ny faha-42 taonany, Rasedinah Jean André, fantatry ny rehetra amin’ny solon’arana hoe Rafaly Be. Mpilalao nandrafitra ny Makis de Madagascar, teo aloha ary nanana ny fahaiza-manaony. “Azo lazaina fa tampoka ity fahafatesan-dRafaly Be ity satria tsy hita hoe narary be izy fa tao anatin’ny hateloana no nahitana azy somary nalazolazo. Ny alatsinainy teo izahay mbola namangy azy ary tsy naninona mihitsy izy, ary tena gaga naheno hoe maty izy, avy eo”, hoy i Eric Sefo.
Raha tsiahivina, ny taona 1991 izy no nanomboka nilalao rugby ary tao amin’ny “Ecole de la vie, ecole de rugby” an’ny Rosa. 1994, voafantina tao anatin’ny ekipan’ny “Ecole de la vie”, nankany La Réunion. Ny taona 2000, nanao kara-pilalaovana izy ary tao amin’ny Rosa, niatrehany lalao voalohany, ho an’ny sokajy D1. Nifindra tao amin’ny 3FB ny taona 2005 ka hatramin’ny fahafatesany. Nitana ny toeran’ny “taloneur” izy ary efa voahosotra ho mpilalao mendrika nandritra ny fihaonana natao tatsy Afrika Atsimo, ny taona 2001. Efa maro ny anaram-boninahitra azony, toy ny tompondakan’ny ligin’Analamanga, ny tompondakan’i Madagasikara, ny Aroi.
Olona tsotra, mahitsy fiteny ary tsy misorona amin’ny zavatra lazainy, saingy be hanihany Rafaly Be. Namela mananontena iray sy zanaka 6 mianadahy izy. Halevina any amin’ny fasan-drazany any Itaosy, amin’ny zoma ho avy izao, Rafaly Be, rehefa avy hanaovana fotoam-pivavahana ao amin’ny Ekar Isotry.
Mirary fiononana feno, ho an’ny fianakaviany sy ny tontolon’ny rugby aalagasy, izahay eto amin’ny Gazety Taratra.